Trano fanangonana, Haeujae - Suwon
Asia Korea Atsimo Suwon
Ny Museum of Kakashki
Adiresy: Korea Atsimo, Gyeonggi-do, Suwon, Jangan-gu, Imok-dong, Jangan-ro 458beon-gil, 9
Fialam-boly : 10.00 hatramin'ny 18.00 isan'andro, afa-tsy ny alatsinainy
Betsaka tsy fahita firy no hita any Korea , saingy ny tranom-bakoka tranokely ( Seoul ) akaikin'i Seoul dia mampivelatra ny eritreritra rehetra Eoropeana. Hitany fa tsy misy mahamenatra ny mponin'ity firenena ity amin'ny resaka momba ny fotoana toy izany. Ireo mpitsidika dia afaka mahita fampirantiana samihafa amin'ny gazo.
Tsy mahagaga izany, satria ny loha-hevitra momba ny lavadrano eto dia tena faly. Isaky ny dingana ao amin'ireo tanàn-dehibe sy tanàna kely dia misy toeram-pivoahana, ary maimaim-poana tanteraka. Ao anatin'ny fahasalamana tonga lafatra izy ireo, na dia eo aza ny tsy fisian'ny fandoavam-bola amin'ny fitsidihana. Ny Koreana rehefa mivezivezy any Eorôpa na any Amerika dia tezitra mafy amin'ny famoahana ny dingana voajanahary toy izany.
Inona no miandry ny mpitsidika any amin'ny tranom-bakoka any Korea?
Ny sasany amin'ireo fampiratiana dia mipetraka eny amin'ny rivotra, fa ny ampahany kosa dia ao amin'ny trano fanangonam-bokatra, naorina amin'ny endriky ny vilia baolina. Ny hevitra momba ny zavaboariny, teraka avy amin'ny ben'ny tanànan'i Seoul teo aloha, dia noraisin'ny mponina teo an-toerana. Ho an'ireo olom-pirenena ao Korea, tsy misy zavatra tsy fanao mahazatra momba ny fomba ataonao amin'ny seza iray ary efa hatry ny ela ianao no nesorinao, ary porofo mivantana ny valan-java- bozaka ao Korea Atsimo.
Ny olon-dehibe sy ankizy samy hafa taona miara-liana dia mandinika sy miresaka momba ny zavatra hitany, tsy misy aloky ny tsikitsiky na menatra eo amin'ny tarehiny. Ankehitriny, tena, marina izany, tsy ratsy izany. Ao amin'ny tranombakoka dia afaka mahita vondrona mpitsangantsangana iray manontolo avy any amin'ireo zana-pokontany sy sekoly. Noho izany, raha mijery eto ianao dia hahita hoe:
Loko misy kofehy mavo mavo mavo. Ao amin'izy ireo, miaraka amin'ny fahalianana mahaliana, miditra ny ankizy, satria eo amin'ny lainga ambany dia samy hafa ny loko sy ny tsy fahampian'ny gonika. Ny marina indrindra dia ny shit golden. Tsy ny olona iray ihany no mihinana sy mitandro ny fahasalamana ara-pahasalamana.
Sarin'ny interactif. Ao anatin'izany no ahafahanao mandinika ny fizotran'ny digestion, amin'ny fanindriana ny sakafo ao am-bolo alohan'ny hamoahana ny fanokafana anal.
Fizarana amin'ny fanosehana. Karazam-borona manao ahoana no tsy mametaka ny boriky? Famoahana iray manontolo no milaza izany. Misy karazana fitaovana isan-karazany, izay ampiasaina amin'ny fotoana samihafa.
Ny ampahany manan-tantara ao amin'ny tranombakoka kakashek. Misy toaka sy toeram-pivoahana, hatramin'ny ora tranainy indrindra hatramin'izao. Ireto ny siny tanimanga, kitay hazo, vatokely vato ary maro hafa. sns. Na dia misy kabone japoney "mahira-tsaina" aza, izay manasitrana sy manamaivana ny boriky - izany no fampirantiana maoderina indrindra.
Kilalao ho an'ny ankizy. Inona no azonao atao amin'ny mozika kakashki any Korea? Mazava ho azy, ao amin'ny trano fivarotana! Eo amin'ny rindrina dia mihazona lamba lamba amin'ny endrika boribory, izay misy takelaka vita amin'ny taratasy. Ny zaza dia afaka manangana ny sariny. Manakaiky ihany ny toeram-pisakafoanana tsotra iray, ary raha maniry tampoka ny ankizy dia afaka manala izany dingana izany amin'ny lahatsary ary avy eo mandefa azy any amin'ny ray aman-dreny.
Fizarana sakafo mahasalama. Eto dia hita mazava fa ilaina ny fampiasana, mba hahazoana ny shit "golden".
Sary sokitra. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny tranombakoka dia afaka mandeha eny amin'ny zaridaina mahazatra ianao ary mijery ireo sarivongana izay mahatonga ny lehilahy hahagaga, mahatsiravina ary mahamenatra. Saingy ny Koreana dia tsy mahafantatra ireo fahatsapana ireo, ary mandinika tsara ny fampiratiana tsirairay. Eto izy ireo dia mampiseho amin'ny toerana manao ahoana ny fametavetana dia mora kokoa, inona ny karazana shit amin'ny zazakely ary ahoana ny endrik'ireo pelaka ao amin'ny toeram-ponenan'ny tanàna.
Rehefa avy nijery ireo sarivongana ianao, dia afaka mandray anjara amin'ny ezaka fifaneraserana mba hamaritana ny tompon'ilay shit, izay biby isan-karazany.
Aiza ny tranom-bakoka?
Tsidiho mozika tsy mahazatra, afaka mivoaka ivelan'i Seoul ianao . Ny tsara indrindra hanaovana izany amin'ny lamasinina, izay mifoha mandritra ny adiny iray amin'ny toerana tiany. Misy fiarandalamby elektrika isaky ny 12 minitra.
Tranoben'ny polisy (Kuala Lumpur)
Nahoana no tsy azo atao ny manosika paompy?
Fitafy lava amin'ny fizarana 2015
Afaka misotro rano ve aho?
Afaka bevohoka ve aho aorian'ny taonan'ny menopause?
Ny teoria momba ny fivoaran'ny maha-olona
Ahoana raha misy vagao ny zanako?
Revalgine - famantarana ny fampiasana
Lymphadenopathy - soritr'aretina
Ankizy 11 volana - fampivoarana sy sakafo
Leokina ravina - fananana medikaly
Vitamina ho an'ny bitro
Ny fahavaratra amin'ny vehivavy 2014
Pants miaraka amin'ny tarika elastika any ambany
Mitondra tanimbolin'ny tanan'ny tanana
Ahoana no hampitomboanao ny fiantsonao?